ပွညျပမှာ တဈနှဈ ကို မွနျမာငှေ သိနျး ၁၂၀၀ ကြျော အထိ ရနိုငျမယျ့ ကုနျတငျယာဉျမောငျးတဲ့ အလုပျ – Nyi Ma Lay
ပွညျပမှာ တဈနှဈ ကို မွနျမာငှေ သိနျး ၁၂၀၀ ကြျော အထိ ရနိုငျမယျ့ ကုနျတငျယာဉျမောငျးတဲ့ အလုပျ
ယခု ဆိုရငျ UK မှာ Covid-19 ကပျရောဂါနဲ့ နောကျဆ ကျတှဲပွဿနာေ တှကွောငျ့ HGV ကုနျတငျယာဉျမော ငျးမြားအ လှနျရှားပါးလာတဲ့ အခကျ အခဲမြားနဲ့ရငျဆိုငျနရေပွီး ဒါက တဈနှဈကို ပေါငျ ၅၀၀၀၀ (မွနျမာငှေ သိနျး ၁၂၀၀ ကြျော) ရနိုငျတဲ့ အလုပျတဈခုဖွ ဈလာပါတယျ။
ခနျ့မှနျးခွအေားဖွငျ့ HGV ယာဉျမောငျး ၁၀၀၀၀၀ ခနျ့လိုအပျေ နကွောငျး logistics industry ကဖျောပွ ထားပါတယျ။ မကွာသေးခငျက ရှားပါးမှုမြားအရ ကုနျတငျယာဉျမောငျးမြားကို ပုံမှနျ တဈပတျကို ၅၅ နာရီနှုနျးနဲ့ တဈနာရီကို ပေါငျ ၂၀ ပေးခရြေပါတယျ။ ပွညျပမှာ လစာကော ငျးကောငျးနဲ့ အလုပျအကိုငျလုပျလို သူယာဉျမော ငျးမြားအတှကျ အခှငျ့အလမျးေ ကာငျးတဈခုပါ။
coronavirus ကူးစကျေ ရာဂါကွောငျ့ HGV ယာဉျမောငျး တဈဦး ဖွဈလာဖို့ စမျးသပျမှုအဆငျ့မှာ အခကျအခဲအခြို့ ရှိသျောလညျး ဗွိတိနျအစိုးရအနနေဲ့ လိုငျစငျရယူ နိုငျမှုလုပျငနျးစဉျကို အရှိနျမွှငျ့ဖို့မွ ကာသေး မီကဆှေးနှေး မှုတဈခုပွုလု ပျခဲ့ပါတယျ။
Vehicle Standards Agency (DVSA) အနနေဲ့ HGV ယာဉျမောငျး ၁၅၀၀ နီးပါးကိုအပတျ တိုငျးသူတို့ရဲ့ကားမောငျးစ မျးသပျမှုအောငျမွ ငျနိုငျအောငျ တိတိကကြလြု ပျဆောငျခဲ့ပွီးဖွဈတယျ။ HGV ယာဉျမောငျးတဈဦး ဖွဈလာဖို့ လုပျဆောငျရမယျ့ လုပျငနျးစဉျအရ ပျရပျရှိပါတယျ။ ဒါတှကေို ကြျောဖွတျ နိုငျမှသာ HGV ယာဉျမောငျးတဈဦွး ဖဈလာမှာဖွဈပါတယျ။
ကုနျတငျယာ ဉျမောငျး တဈဦးဖွဈလာဖို့ စိတျဝငျစားတ ယျဆိုရငျတော့ HGV လိုငျစငျရရှိဖို့က ပထမအဆငျ့ပါ။ HGV ဆိုတာ Heavy Goods Vehicle ကိုဆိုလိုပါတယျ။ LGV (Large Goods Vehicle) လို့လညျးေ ချါဆိုပါတယျ။ HGV လိုငျစငျ က ၃.၅ တနျထကျပိုတဲ့ကုနျတငျကားမြားကို မောငျးနှငျခှငျ့ရှိပွီး C, C+E, C1 နဲ့ C1+E စတဲ့ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ အမြိုးအစား မြားအောကျမှာရှိ ပါတယျ။
HGV လိုငျစငျမြား ဟာ ၅ နှဈသကျတမျးရှိပွီး DVSA (Driver and Vehicle Standards Agency) ကနထေုတျပေးပါတယျ။ HGV လိုငျစငျရဖို့အတှကျ special training ကိုအောငျေ အာငျမွငျွ မငျပွီးမွောကျဖို့နဲ့ theory test အောငျဖို့လိုအပျပါတယျ။
HGV လိုငျစငျက လိုအပျလား??
၃.၅ တနျအထကျယာ ဉျကိုမောငျးခြ ငျတယျဆိုရငျတော့ HGV လိုငျစငျလို အပျပါတယျ။ ဒီနရောမှာ ပုံမှနျယာဉျေ မာငျးလိုငျစငျ (အမြိုးအစား 😎 ကိုသုံးလို့မရပါဘူး။ ဒါကတရားမဝငျသလို လိုငျစငျပိတျသိ မျးခံရနိုငျပါတယျ။ HGV လိုငျစငျအတှကျအ ရညျအခငျြးပွညျ့ မီဖို့အတှကျ အသကျ ၁၈ နှဈအထ ကျဖွဈရပါမယျ။ Driver CPC ကိုငျဆောငျထားရပါမယျ။ သီအိုရီနဲ့ လကျတှစေ့မျး သပျမှုကို အောငျမွငျရပါမယျ။
CPC က Certificate of Professional Competence ကိုဆိုလိုပါတယျ။ ၎င်းငျးကို ၃.၅ တနျအထကျရှိတဲ့လု ပျငနျးသုံးယာဉျမော ငျးနှငျရာမှာလို အပျပါတယျ။ ဆိုလိုတာက HGV လိုငျစငျရယွူ ခငျးရဲ့ တဈစိတျတဈပိုငျးအနနေဲ့ CPC Qualification ကိုရယူဖို့လိုအ ပျမှာဖွဈတယျ။ CPC qualification အောငျမွငျဖို့အတှကျ အောကျဖျောပွပါ အဆငျ့ ၄ ဆငျ့ ဖွတျကြျောရမှာဖွဈတယျ။
အဆငျ့ ၁ – သီအိုရီစမျးသပျမှု (HGV နဲ့တူသောစမျးသပျမှု)
အဆငျ့ ၂ – Driver CPC case study test
အဆငျ့ ၃ – ယာဉျမောငျးစှမျးရညျစမျးသပျခွငျး (HGV နဲ့တူညီသောစမျးသပျမှု)
အဆငျ့ ၄ – Driver CPC သရုပျပွစမျးသပျခွငျး
HGV လိုငျစငျလြှောကျ ထားနညျး
HGV လိုငျစငျရ ရှိဖို့အတှကျ လုပျဆောငျရမယျ့ အဆငျ့မြားစှာရှိပါတယျ။
theory test မှာ Multiple choice, hazard perception နဲ့ case studies ဆိုပွီး အပိုငျး ၃ ပိုငျးရှိပါတယျ။ စမျးသပျမှုရလာဒျကို နခေ့ငျြးပဲ ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီအပိုငျးအားလုံးအတှကျ စုစုပေါငျးကုနျကစြရိတျက ပေါငျ ၆၀ ဖွဈပါမယျ။
– ကားမောငျးနိုငျစှ မျးစမျးသပျမှု (လကျတှေ့)
ဒီအပိုငျးက ၁ နာရီနဲ့ မိနဈ ၃၀ ကွာပါမယျ။ ယာဉျအန်တရာယျ ကငျးရှငျးရေး၊ လမျးပျေါမောငျးနှငျခွငျးနဲ့ လမျးကွမျးလကေ့ငျြ့ခနျးမြားပါဝငျမှာဖွဈတယျ။ ဒီနရောမှာ ကိုယျပိုငျယာ ဉျယူလာဖို့လိုအပျပါ မယျ။ ၎င်းငျးစမျးသပျမှုအတှကျ ရလာဒျ ကိုလညျး နခေ့ငျြးရရှိမှာဖွဈတယျ။ ဒီအပိုငျးအတှကျ ကုနျကစြရိတျက ပေါငျ ၁၁၅ ကပြါမယျ။
ဒီအပိုငျးမှာဆိုရငျ ဘေးက ငျးလုံခွုံမှုနဲ့ အကောငျးဆုံးလေ့ ကငျြ့မှုဆိုငျရာဗဟု သုတမြားကိုစမျး သပျမှာဖွဈတယျ။ စမျးသပျ မှုပွီးဆုံးတာနဲ့ ၎င်းငျးအတှကျ ရလာဒျကို သိရမှာဖွဈတယျ။ ဒီအပိုငျး အတှကျ ကုနျကစြရိတျက ပေါငျ ၂၅ ဖွဈပါတယျ။
– NVT ကဒျ
နောကျဆုံးမှာ စမျးသပျမှုမြားအောငျွ မငျတာနဲ့ National Vocational Training ရရှိခွငျးကို ကိုယျစားပွုတဲ့ NVT concession card ကို order လုပျနိုငျမှာဖွဈတယျ။ ဒါက ၎င်းငျးကဒျကိုယူေ ဆာငျလာရ မယျ့ တရားဝငျလိုအပျခြ ကျတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒီအတှကျ ပုံမှနျကုနျ ကစြရိတျက ၂၅ ပေါငျဖွဈပါတယျ။
practical အပိုငျးအော ငျဖို့အတှကျ အနညျးဆုံး ၃၅ နာရီကွာပါမယျ။ အဲ့ဒီမှာ HGV/LGV (သို့) CPC သငျတနျးမြားပံ့ပိုးပေးတဲ့ providers မြားစှာရှိပါတယျ။
စာမေးပှဲေ ကွးအပါအဝငျ HGV လိုငျစငျအတှကျ စုစုပေါငျး ကုနျကစြရိတျက ပေါငျ ၂၂၅ ဖွဈပါမယျ။
HGV လိုငျစငျရဲ့ သကျတမျးက ၅ နှဈဖွဈပါတယျ။ သကျတမျးကုနျပွီးတာနဲ့ အသိပညာ fresh ဖွဈဖို့နဲ့ safety advances မြား up to date ဖွဈစဖေို့အတှကျ လကျတှေ့ HGV သငျတနျး ၃၅ နာရီ ဝငျခွငျးဖွငျ့ ၎င်းငျးကိုသကျ တမျးတိုးရနျလိုအပျပါတယျ။ Credit –
ယခု ဆိုရင် UK မှာ Covid-19 ကပ်ရောဂါနဲ့ နောက်ဆ က်တွဲပြဿနာေ တွကြောင့် HGV ကုန်တင်ယာဉ်မော င်းများအ လွန်ရှားပါးလာတဲ့ အခက် အခဲများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီး ဒါက တစ်နှစ်ကို ပေါင် ၅၀၀၀၀ (မြန်မာငွေ သိန်း ၁၂၀၀ ကျော်) ရနိုင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုဖြ စ်လာပါတယ်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် HGV ယာဉ်မောင်း ၁၀၀၀၀၀ ခန့်လိုအပ်ေ နကြောင်း logistics industry ကဖော်ပြ ထားပါတယ်။ မကြာသေးခင်က ရှားပါးမှုများအရ ကုန်တင်ယာဉ်မောင်းများကို ပုံမှန် တစ်ပတ်ကို ၅၅ နာရီနှုန်းနဲ့ တစ်နာရီကို ပေါင် ၂၀ ပေးချေရပါတယ်။ ပြည်ပမှာ လစာကော င်းကောင်းနဲ့ အလုပ်အကိုင်လုပ်လို သူယာဉ်မော င်းများအတွက် အခွင့်အလမ်းေ ကာင်းတစ်ခုပါ။
coronavirus ကူးစက်ေ ရာဂါကြောင့် HGV ယာဉ်မောင်း တစ်ဦး ဖြစ်လာဖို့ စမ်းသပ်မှုအဆင့်မှာ အခက်အခဲအချို့ ရှိသော်လည်း ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ လိုင်စင်ရယူ နိုင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ဖို့မြ ကာသေး မီကဆွေးနွေး မှုတစ်ခုပြုလု ပ်ခဲ့ပါတယ်။
Vehicle Standards Agency (DVSA) အနေနဲ့ HGV ယာဉ်မောင်း ၁၅၀၀ နီးပါးကိုအပတ် တိုင်းသူတို့ရဲ့ကားမောင်းစ မ်းသပ်မှုအောင်မြ င်နိုင်အောင် တိတိကျကျလု ပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ HGV ယာဉ်မောင်းတစ်ဦး ဖြစ်လာဖို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်အရ ပ်ရပ်ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို ကျော်ဖြတ် နိုင်မှသာ HGV ယာဉ်မောင်းတစ်ဦြး ဖစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်တင်ယာ ဉ်မောင်း တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ စိတ်ဝင်စားတ ယ်ဆိုရင်တော့ HGV လိုင်စင်ရရှိဖို့က ပထမအဆင့်ပါ။ HGV ဆိုတာ Heavy Goods Vehicle ကိုဆိုလိုပါတယ်။ LGV (Large Goods Vehicle) လို့လည်းေ ခ်ါဆိုပါတယ်။ HGV လိုင်စင် က ၃.၅ တန်ထက်ပိုတဲ့ကုန်တင်ကားများကို မောင်းနှင်ခွင့်ရှိပြီး C, C+E, C1 နဲ့ C1+E စတဲ့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစား များအောက်မှာရှိ ပါတယ်။
HGV လိုင်စင်များ ဟာ ၅ နှစ်သက်တမ်းရှိပြီး DVSA (Driver and Vehicle Standards Agency) ကနေထုတ်ပေးပါတယ်။ HGV လိုင်စင်ရဖို့အတွက် special training ကိုအောင်ေ အာင်မြင်ြ မင်ပြီးမြောက်ဖို့နဲ့ theory test အောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
HGV လိုင်စင်က လိုအပ်လား??
၃.၅ တန်အထက်ယာ ဉ်ကိုမောင်းချ င်တယ်ဆိုရင်တော့ HGV လိုင်စင်လို အပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပုံမှန်ယာဉ်ေ မာင်းလိုင်စင် (အမျိုးအစား 😎 ကိုသုံးလို့မရပါဘူး။ ဒါကတရားမဝင်သလို လိုင်စင်ပိတ်သိ မ်းခံရနိုင်ပါတယ်။ HGV လိုင်စင်အတွက်အ ရည်အချင်းပြည့် မီဖို့အတွက် အသက် ၁၈ နှစ်အထ က်ဖြစ်ရပါမယ်။ Driver CPC ကိုင်ဆောင်ထားရပါမယ်။ သီအိုရီနဲ့ လက်တွေ့စမ်း သပ်မှုကို အောင်မြင်ရပါမယ်။
CPC က Certificate of Professional Competence ကိုဆိုလိုပါတယ်။ ၎င်းကို ၃.၅ တန်အထက်ရှိတဲ့လု ပ်ငန်းသုံးယာဉ်မော င်းနှင်ရာမှာလို အပ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက HGV လိုင်စင်ရယြူ ခင်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ CPC Qualification ကိုရယူဖို့လိုအ ပ်မှာဖြစ်တယ်။ CPC qualification အောင်မြင်ဖို့ အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အဆင့် ၄ ဆင့် ဖြတ်ကျော်ရမှာဖြစ်တယ်။
အဆင့် ၁ – သီအိုရီစမ်းသပ်မှု (HGV နဲ့တူသောစမ်းသပ်မှု)
အဆင့် ၂ – Driver CPC case study test
အဆင့် ၃ – ယာဉ်မောင်းစွမ်းရည်စမ်းသပ်ခြင်း (HGV နဲ့တူညီသောစမ်းသပ်မှု)
အဆင့် ၄ – Driver CPC သရုပ်ပြစမ်းသပ်ခြင်း
HGV လိုင်စင်လျှောက် ထားနည်း
HGV လိုင်စင်ရ ရှိဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အဆင့်များစွာရှိပါတယ်။
theory test မှာ Multiple choice, hazard perception နဲ့ case studies ဆိုပြီး အပိုင်း ၃ ပိုင်းရှိပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုရလာဒ်ကို နေ့ချင်းပဲ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပိုင်းအားလုံးအတွက် စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်က ပေါင် ၆၀ ဖြစ်ပါမယ်။
– ကားမောင်းနိုင်စွ မ်းစမ်းသပ်မှု (လက်တွေ့)
ဒီအပိုင်းက ၁ နာရီနဲ့ မိနစ် ၃၀ ကြာပါမယ်။ ယာဉ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ လမ်းပေါ်မောင်းနှင်ခြင်းနဲ့ လမ်းကြမ်းလေ့ကျင့်ခန်းများပါဝင်မှာဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ်ပိုင်ယာ ဉ်ယူလာဖို့လိုအပ်ပါ မယ်။ ၎င်းစမ်းသပ်မှုအတွက် ရလာဒ် ကိုလည်း နေ့ချင်းရရှိမှာဖြစ်တယ်။ ဒီအပိုင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်က ပေါင် ၁၁၅ ကျပါမယ်။
ဒီအပိုင်းမှာဆိုရင် ဘေးက င်းလုံခြုံမှုနဲ့ အကောင်းဆုံးလေ့ ကျင့်မှုဆိုင်ရာဗဟု သုတများကိုစမ်း သပ်မှာဖြစ်တယ်။ စမ်းသပ် မှုပြီးဆုံးတာနဲ့ ၎င်းအတွက် ရလာဒ်ကို သိရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီအပိုင်း အတွက် ကုန်ကျစရိတ်က ပေါင် ၂၅ ဖြစ်ပါတယ်။
– NVT ကဒ်
နောက်ဆုံးမှာ စမ်းသပ်မှုများအောင်ြ မင်တာနဲ့ National Vocational Training ရရှိခြင်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ NVT concession card ကို order လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါက ၎င်းကဒ်ကိုယူေ ဆာင်လာရ မယ့် တရားဝင်လိုအပ်ချ က်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ပုံမှန်ကုန် ကျစရိတ်က ၂၅ ပေါင်ဖြစ်ပါတယ်။
practical အပိုင်းအော င်ဖို့အတွက် အနည်းဆုံး ၃၅ နာရီကြာပါမယ်။ အဲ့ဒီမှာ HGV/LGV (သို့) CPC သင်တန်းများပံ့ပိုးပေးတဲ့ providers များစွာရှိပါတယ်။
စာမေးပွဲေ ကြးအပါအ၀င် HGV လိုင်စင်အတွက် စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ်က ပေါင် ၂၂၅ ဖြစ်ပါမယ်။
HGV လိုင်စင်ရဲ့ သက်တမ်းက ၅ နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်းကုန်ပြီးတာနဲ့ အသိပညာ fresh ဖြစ်ဖို့နဲ့ safety advances များ up to date ဖြစ်စေဖို့အတွက် လက်တွေ့ HGV သင်တန်း ၃၅ နာရီ ၀င်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကိုသက် တမ်းတိုးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ Credit –
Previous post သူ့ရဲ့ကနျြတဲ့ ဘဝသကျတမျးတလြှောကျ ကို ခှေးတဈကောငျလိုပဲ နထေိုငျဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တဲ့ အံ့ဖှယျလူသား
Next post လူ အိပျနသေျောလညျး ကုသိုလျကံ အကြိုးပေး မအိပျသော အလှူ ( ၇ ) မြိုး နဲ့ မလှူသငျ့ တဲ့ အလှူ ၁၀ မြိုး